Maxaa Loo Ceyriyey Wasiirkii Arrimaha Dibadda Maxamed Cabdirisaaq? - Bulsho News
Imaaraadka Carabta oo 10 bilyan oo dollar ku maal-gashaneysa Turkiga
Su’aasha ugu weyn ee jawaabta u baahan maanta waa sababta loo ceyriyey wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Cabdirisaq, looguna dhiibay jagada mid ka mid ah gacanyareyaasha madaxweynaha muddadiisu dhamaatay Maxamed Cabdullahi Farmaajo?
Inkasta oo Cabdirisaq naftiisa uu ka gaabsaday jawaabta sababta loo ceyriyey mar ay VOA wax ka weydiisay hadana waxaa uu Twitter qoraal uu soo dhigay ku sheegay inuu la fajacay tallaabada xilka looga qaaday isaga oo intaas raaciyey inuuba miiska saaray iscasilaaddiisa todobaad kahor.
Maxamed oo sanad uun kasoo wareegtay markii xilka uu kala wareegay Axmed Ciise Cawad oo jagada uga horeeyey ayaa u muuqda mid laga maarmay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Maxamed uu eersaday ceyrinta ku-xigeenkii AMISOM Simon Mulongo iyada oo todobaadkii hore ay Muqdisho degdeg ku yimaadeen wafdi sare oo ka socday Midowga Afrika gaar ahaan xafiiska nabadda iyo amniga.
Soomaaliya oo ku jirta doorasho guud ayaa waxaa ay dadka qaar qabaan in wasiirka cusub loo keenay inuu daboolo cadaadiska beesha caalamka ee hufnaan la’aanta iyo boobka doorashada.
“Farmaajo waxaa uu doonayaa qof ka difaaci kara sida doorashada u socoto iyo damaciisa boobka ah, oo beesha caalamka aaney raali ka aheyn, sidaas darteed ayuu jagada ugu dhiibtay gacanyarahiisa” wasaa sidaa Goobjoog News u sheegay siyaasi codsaday in magaciisa la qariyo.
Cabdi Saciid Muuse, oo ah ninka loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha dibadda waxaa uu ahaa agaasimaha Villa Somalia, isaga oo sidoo kale 5-tii sano ee lasoo dhaafay ahaan lataliyaha Farmaajo ee amniga.
UN nuclear watchdog chief presses for more access...
Askar AMISOM ka tirsan oo loo haystay in...
Siyaaradii Sheekh Cabdi Celi oo laga taagay calanka...
Maxay shacabka Sudan u dalbanayaan in afgambi uu...
Ha Igu Soo Deg-degin: Daawo Lionel Messi Oo...
Shaxda Ay Liverpool Kaga Hor Tagi Karto Southampton.
5 Xul Oo Waaweyn Oo Halis Ugu Jira...